Dad badan oo ku dhintay rabshadaha iyo qalalaasaha ka socdo Itoobiya iyo xaalka oo ka sii daray | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Dad badan oo ku dhintay rabshadaha iyo qalalaasaha ka socdo Itoobiya iyo...
Dad badan oo ku dhintay rabshadaha iyo qalalaasaha ka socdo Itoobiya iyo xaalka oo ka sii daray
Illaa 81 ruux ayaa la soo wariyay in lagu dilay rabshadaha iyo qalalaasaha ka socda qeybo ka mid ah magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka ku hareereysan gobolka oromada.
Ciidamo Milateri ah ayaa la geeyay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Itoobiya, iyadoo rabshadaha ka socda Gobolka Oromada uu sii xoogeystay, kaddib dilkii fanaankii caanka ahaa Haacaaluu Hundeesaa oo isniintii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Addis Ababa.
Dilka Fanaanka Haacaaluu oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa huriyay xiisado waa weyn oo halis geliyay xasiloonida dalka Itoobiya.
Rasaas ayaa ka dhacday xaafado ka tirsan Addis Ababa iyo magaalada Ambo ee Gobolka Oromada, waxaana isku dhacyo dhex mareen Ciidamada, iyo kooxo ku hubeysan baangado iyo ulo.
Illaa 35 ruux oo ku jiro Jawar Mohamed ayaa xabsiga la dhigay, waxaana Booliska ay sheegayaan inay dadka la xiray ay ku jiraan labo ruux oo looga shaki qabo inay ku lug lahaayeen dilka Fanaanka.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa wajahaya culeysyo siyaasadeed oo ay uga weyn tahay qalalaasaha ka socda qeybo ka mid ah dalka, waxaana gobolada Oromada xaalkiisa yahay mid aan sal adag ku taagneyn
Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in la aaso Fanaanka ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ka mid ahaa dadkii loo xiray arrimaha siyaasadda, kaasoo sanadkii 2018 la soo daayay, markii is bedelka uu ka dhacay Itoobiya.